Trans World ရေဒီယိုကိုတိုးချဲ့ပြီးတိုးချဲ့ခြင်း NETIA Radio-Assist (TM) တပ်ဆင်မှုများ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဖြတ်ကျော်ကမ္ဘာ့ဖလားရေဒီယိုအဆင့်မြှင့်မှုများနှင့်တိုးချဲ့ NETIA ရေဒီယို-Assist (TM) ထည့်သွင်းခြင်း
CLARET, ပြင်သစ် - ဇွန်လ 30, 2015 -- NETIA ယနေ့ဖြတ်ကျော်ကမ္ဘာ့ဖလားရေဒီယို (TWR), ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးခရစ်ယာန်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းသစ်တခုထည့်သွင်းအပါအဝင် NETIA ရဲ့ (TM) ရေဒီယို-Assist ဒီဂျစ်တယ်အသံ software ကို suite ကို၏ဗားရှင်း 8.2 မှ၎င်း၏ဂူအမ်ရေဒီယိုဘူတာရုံ, KTWR အဆင့်မြှင့်သည်ဟုကြေညာခဲ့သည် module ကိုထုတ်လွှင့်။ TWR လည်းဒေသတွင်း၌ NETIA ရဲ့ပထမဆုံးဖြန့်ကျက်ကိုယ်စားပြု၎င်း၏တောင်အာရှထုတ်လွှင့်အဆောက်အဦမှာလုံးဝသစ်ကိုရေဒီယို-Assist စနစ်အားတပ်ဆင်ရန် NETIA နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။
"လက်ရှိ KTWR မှာစနစ်ကရေဒီယို-Assist သော်လည်း, 8.2 ပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နားထောင် '' လက်ရှိလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable ပြုလုပ် features အသစ်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကမ်းလှမ်းဗားရှင်းဖို့အဆင့်မြှင့်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောခဲ့," ဒေါက်ဂလပ် Gregson, TWR ပစိဖိတ်, KTWR ဂူအမ်မှာစနစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲသူကဆိုသည်။ "ဂူအမ်၌ဤအဆင့်မြှင့်နှင့်တောင်အာရှတွင်သစ်ကိုဖြန့်ကျက်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်မှုတိုးချဲ့နှင့်အာရှတစ်လျှောက်လုံးအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်စေရန် tools တွေကိုရှိသည်။ ဤအစွမ်းရည်နှစ်ခုစလုံးကမ္ဘာတဝှမ်းအဝေးရောက်ပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်မှအခြေခံပါ။ "
TWR အဖွဲ့အစည်း Analog စကနေဒစ်ဂျစ်တယ်ရန်၎င်း၏ဂူအမ်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်စက်ရုံပြောင်းလဲဖို့ရေဒီယို-Assist system ကိုထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာ 2000, ကတည်းက NETIA client ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ NETIA ဆော့ဖ်ဝဲကိုဝယ်ယူရာမှ multiplatform ထုတ်လွှင့်ရန်, ရေဒီယိုစက်ရုံ၏အဆုံးမှအဆုံးသို့စစ်ဆင်ရေးအမှာစကားပြောကြား။ အသုံးပြုသူများတစ်ခုတည်းပေါင်းစည်း interface မှတစ်ဆင့်စားသုံးမိပါ, တည်းဖြတ်, အချိန်ဇယားဆွဲ, ထုတ်လွှင့်, multicast, သိမ်းဆည်း, ဒေတာလုံခြုံရေး, နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါ။
"ကျနော်တို့က TWR နှင့်အဖွဲ့အစည်း NETIA ဖြေရှင်းချက်ခေတ်သစ်ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်စေခြင်းငှါငါသည်ဟုတန်ဖိုးကိုရှုမြင်ကြောင်းကျေနပ်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆက်လက်ဂုဏ်ယူနေကြတယ်" ဟုပတေရုသ Fong သည်, NETIA မှာအာရှပစိဖိတ်အရောင်းမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။ "ရေဒီယို-Assist 8.2 အတွက်ကျယ်ပြန့်အင်္ဂါရပ် set ကိုထိုကဲ့သို့သော TWR အဖြစ်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ယနေ့မီဒီယာစားသုံးသူများကမျှော်လင့်ထားသည့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အရည်အသွေးနှစ်ခုစလုံးပူဇော်နိုင်မသေချာ။ "
NETIA နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်အစုစုနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.netia.com.
NETIA တစ် Globecast ကုမ္ပဏီနှင့်လိမ္မော်ရောင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, မီဒီယာပလက်ဖောင်းများယနေ့အပြည့်အဝခင်းကျင်းဖို့အကျိုးရှိစွာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်အကြောင်းအရာပေးပို့ enable ပေးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ 15,000 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက် 200 တပ်ဆင်ကျော် 40 အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ပေါ်မှီခို, NETIA ဖြေရှင်းနည်းများ, အင်တာနက်ကိုအပါအဝင် multiplatform ဆိုင်များတွင်ပစ်မှတ်ထား, content တွေကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပိုင်ရှင်တွေပေးပို့ဖို့စားသုံးမိရာမှအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရန် VOD ခွင့်ပြု IPTV န်ဆောင်မှုများနှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်။
NETIA အဓိကရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအမှတ်တံဆိပ်နှင့်မှရေဒီယိုအလိုအလျောက်, မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည် မာလ်တီမီဒီယာ ကမ္ဘာတဝှမ်းအုပ်စုများ။ clients The Associated Press, ABC News သို့ရေဒီယိုကွန်ယက်, WestwoodOne, ဘရာဇီးအတွက်ရေဒီယို Globo, သြစတြေးလျအတွက်မလေးရှား, SBS နှင့် ABC ရုပ်သံများတွင် RTM, MediaCorp စင်္ကာပူ, RAI အီတလီ, ဘန်ဝစ်ပြင်သစ်, ရေဒီယိုပြင်သစ်, ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက် RTBF နှင့်ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားပါဝင်သည်။ NETIA ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြန့်ဖြူးမိတ်ဖက်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ကိုအပြင်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်, ပဲရစ်, ရောမမြို့, မော်စကိုနှင့်စင်္ကာပူတွင်ရုံးခန်းများနှင့်အတူ, ပြင်သစ်၎င်း၏ဌာနချုပ်ရှိတယ်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/NETIA/NETIA-RA8_2-MusicScheduling.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: NETIA ရေဒီယို-Assist (TM) 8.2 Music ကိုစီစဉ်ခြင်း
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ NETIA ရေဒီယို-Assist ဖြတ်ကျော်ကမ္ဘာ့ဖလားရေဒီယို တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-06-30
ယခင်: ဆွီဒင်ရဲ့ TV4 နယူးစတူဒီယိုထဲမှာသတင်းကဏ္ဍနှင့်ဂရစ်ဖစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာအဘို့အ ChyronHego အပေါ်မှီခို
နောက်တစ်ခု: aurora မာလ်တီမီဒီယာရဲ့ IPX-TCW3 A / V ကိုဖြန့်ဖြူးအမှတ်တရပြား InfoComm 2015 မှာ Show ကိုဆုချီးမြှင့်၏အကောင်းဆုံးဆွတ်ခူး